Zimbabwe's government has vowed to identify the independence war veterans and put them on trial.
Zimbabwean President Robert Mugabe. Picture: African Union Facebook page.
HARARE - Zimbabwe's government denounced leading independence war veterans as traitors on Saturday for an unprecedented attack on ageing President Robert Mugabe and vowed to identify its unnamed authors and put them on trial.
"Government ... dismisses the said traitorous so-called communique, which is treasonable in the constitutional democracy that Zimbabwe is," Retired Brigadier-General Asher Tapfumaneyi, the most senior civil servant in the veterans' ministry, said in a statement on Saturday.
"Dr Grace Mugabe: A woman who conquered Africa," read a headline in the _Herald _newspaper, reflecting the growing political influence of the First Lady since her appointment to the top leadership of ZANU-PF in 2014.